प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण ३ बिहिबार , २,०३१ पटक हेरिएको
काठमाडौं । वीरेन्द्र स्कुल भक्तपुर क्षेत्रमा १४ घण्टाको फरकमा पीएम २.५ को धुलोको प्रदूषण दुई सय ५१ माइक्रोग्राम परमिटर क्युले वृद्धि भयो।
मंगलबार बिहान ६ बजे १२ माइक्रोग्राम परमिटर क्यु मात्र भएको वायुप्रदूषण राति ८ बजेसम्म वृद्धि भएर दुई सय ६३ पुग्दा वायुप्रदूषण स्तर वर्षकै उच्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले २५ र राष्ट्रिय मापदण्डमा ४० माइक्रोग्राम परमिटर क्यु तोकेको छ। रत्नपार्क क्षेत्रमा राति ८ः३५ बजे पीएम २.५ आकारको धुलो दुई सय ३९ माइक्रोग्राम परमिटर क्यु पुगेको थियो यहाँ दिउँसो २ः३० बजे २७ मात्र थियो। ६ घण्टाको फरकमा उपत्यकामा दुई सय १२ माइक्रोग्राम परमिटर क्यु वृद्धि भयो।
महाशिवरात्रि भएकाले विभिन्न स्थानमा खुला क्षेत्रमा आगो बाल्ने काम तीव्र भएकाले प्रदूषणको अवस्था उच्च भएको हुन सक्ने वातावरण विभागकी प्रवक्ता सफला श्रेष्ठले बताइन्।
अन्य दिनभन्दा बढी प्रदूषण बढ्नुमा खुला क्षेत्रमा आगो बाल्दा निस्कने धुवाँ नै पहिलो कारण भएको उनी बताउँछिन्। अमेरिकी दूतावासले राखेको फोरा दरबार क्षेत्रमा मंगलबार राति १२ बजे दुई सय २७ पुगेको छ।
प्रदूषणको दर दुई सय माइक्रोग्राम परमिटर क्युभन्दा माथि पुगेपछि मानवस्वास्थ्यका लागि खतराजनक भएको वातावरणविद्ले बताएका छन्।
पीएम २।५ धुलोको कण आँखाले नदेख्ने मसिनो हुँदा श्वासनली हुँदै रक्तनलीसम्म पुग्ने भएकाले श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै क्यान्सरजस्ता रोगको मुख्य कारण बन्ने गरेको भनेर स्वास्थ्यकर्मीले सचेत गराएका छन्।
अन्य दिनभन्दा बढी प्रदूषण बढ्नुमा खुला क्षेत्रमा आगो बाल्दा निस्कने धुवाँ नै पहिलो कारण हो।
मंगलबार उपत्यकाका मन्दिर, चोकचोकमा आगो बालेर बस्दा प्रदूषणको दर बढे पनि सरकारी निकायबाट सचेतनाका लागि कुनै पहल भएन। सांस्कृतिक परम्परा भएको भन्दै विभागले यसमा कुनै चासो नदेखाएको जनायो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि वायुप्रदूषणको न्युनीकरणमा जिम्मेवार भएकाले दाउरा बाल्ने प्रचलनलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ।
राष्ट्रिय नेटवर्क बनाएर वायु गुणस्तरको अवस्थालाई जाँच गरी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको वातावरण विभागको छ। यसका लागि ५६ स्थानमा केन्द्र राख्नेछ।
तराई क्षेत्रमा वायुप्रदूषणको दर बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि वातावरण विभागले यसै वर्ष चार स्थानमा वायुप्रदूषण गुणस्तरमापन केन्द्र राख्ने तयारी थालेको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क चार अर्ब नाघ्यो, समस्या झनै विकराल
ओहो ! उपत्यकामा एक सेकेन्ड पनि सास फेर्न योग्य हावा छैन
धुँवाधुलोले फोक्सो भरिँदै, प्रदूषण रोक्ने तीन अर्ब ढुकुटीमै
काठमाडौंको प्रदूषण चरम सीमामा, वायु प्रदूषणले वायु गुणस्तर मापन यन्त्र नै बिग्रियो
वातावरण प्रदूषणबारे चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब गाह्रो छैन प्रदूषण नाप्न
ज्यानमारा प्रदूषण, ‘सिन्का भाँच्दैन’ सरकार
प्रदूषण कम गर्न युरो–४ इन्धन भित्रिदै, भाडा पनि बढ्ने आयु पनि बढ्ने
प्रदूषणले विश्वमै आतंक, वर्षमा ६५ लाख मानिसको मृत्यु प्रदूषणबाटै